Alshabaab oo sheegatay inay 25 qof ku dileen weerarkii SYL Hotel | Berberanews.com
Home WARARKA Alshabaab oo sheegatay inay 25 qof ku dileen weerarkii SYL Hotel
Kooxda Al-Shabaab ayaa bayaan rasmi ah oo ay soo saartay ku sheegatay in weerarkii xalay ay maleeshiyada kooxdaas ku qaadeen hotelka SYL ee magaalada Muqdisho ay ku dileen 25 qof, sidoo kalena ku dhaawaceen 39 kale.
Khasaarahan ayaa ka duwan kan ay shaacisay dowladda oo dhimashada weerarka ku sheegtay 5 qof oo shacab iyo askar isugu jira.
Waxaa sidoo kale weerarka ku dhintay dhammaan shanti nin ay soo qaaday oo ciidamada dowladda ay wada toogteen kadib howl-gal qaatay 7 saac.
Dhinaca kale, idaacadda Andalus ee kooxdaas ayaa baahisay magacyada dhowr qof oo isugu jira mas’uuliyiin iyo saraakiil ciidan oo kooxda ay sheegatay inay weerarkaas ku dishay.
Ma jirto cid si madax banaanu xaqiijin karta sheegashada Al-Shabaab.
Ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa abaare kowdii xalay xilliga Muqdisho soo afjaray, hawlgalkii hoteelka SYL ee Muqdisho.
Weerarka ayaa bilwoday daqiiqado ka hor 7-dii fiidnimo ee xilliga Muqdidhsu. Waxaana la sheegay in maleeshiyaadka ay qaar rasaas ku fureen ciidamada ilaalada madaxtooyada halka kuwo kalena ay galeen hoteelka SYL.
Ciidamada ayaa intii uu weerarku socday waxay soo samata bixiyeen 82 qof, sida ay mar sii horeysay iclaamisay General Zakiya Xuseen Axmed, Taliye Kugeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed.
Shabaab ayaa waxaa muuqata in ay wax ka bedeleen weeraradii ay ku qaadi jireen Hoteelada Magaalada Mqdisho oo ku bilaaban jiray qaraxyo, ha yeeshee uu weerarkii caawa ku bilowday dagaal toos ahaa oo maleeshiyadooda ay ku qaadeen ilaaladii hotelka.
Previous articleTurkiga oo digniin adag u diray waddamada Hungurigu ka hayo Gaaska Mediterranean-ka
Next articleThe Sool-Sanaag dispute involves local, regional and national dynamics